Search အပြာကားသီးသန့် - BajarFB.com
Search Results - အပြာကားသီးသန့်
ကြီး ရှည် ကြာ ဆေးမှာယူရန် 09959700041
😏ခတ်ပျတ်ပျတ်ပဲ ​ရောင်းတယ်ဗျာ 😏 အတုလားအစစ်လားမေးမေးနေကြတဲ့အကိုတို့ ဆေးအစစ်ပဲရောင်းတယ်ရှင်းလား .... ကိုယ်တိုင်လဲသုံးနေသလို ရောင်းလဲရောင်းပေးတယ် ဘာဆေးလဲ ဘယ်လောက်လဲ မမေးနဲ့ စားကိုဆုံးအောင်ဖတ်ကြပါ.... ဆေးမသောက်ခင်က ၅လက်မလောက်ပဲရှိတာ အခု formu္မla 41 ဆေးတစ်မျိုးပဲသောက်တယ်... အခုဆို ၇ လက်မရှိနေပြီ..... ဆေးမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးပြောနေတဲ့လူတွေ Chat box လာခဲ့လက်တွေပြမယ်😎 ဆေးကို အကြိုးရှိ့အောင်သောက်ထက်ဖို့တော့လိုတယ် .... ဆေးမစွမ်းရင် ၂ ဆ ပြန်အမ်းလိုက်မယ်😎😎 ဝယ်ချင်ရင်ဖုန်းဆက်လိုက်ရောင်းပေးတယ် 09-959 7000 41 ဘာတွေကောင်းလဲ သိချင်ရင် အောက်မှာရှင်းပြထားတယ်စာကို ဆုံးအောင်းဖက်သွား 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 💥 ပန်းသေ/ပန်းညှိုးရောဂါဖြစ်ခြင်း 💥 ဆီးချိုရောဂါကြောင့် ကျားအားလျော့နည်းခြင်း 💥 အိပ်ယာထဲမှာအချိန်တိုအတွင်းအပြီးမြန်ခြင်း 💥 စိတ်ဆန္ဒရှိပေမယ့် ခေါင်းမထောင်နိုင်ခြင်း 💥 ငယ်ပါ သေးငယ်၍ဖြစ်စေ အားမရခြင်းတို့ကို ထိရောက်မှုအရှိဆုံး လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ ဖြေရှင်း ပေးပါတယ်..။ ဖော်မြူလာရဲ့ ၁ နာရီအတွင်း ထူးခြားတဲ့ အာနိသင်တွေကတော့... 👉 အကြောပြိုင်းပြိုင်းထ၍ ထောင်မက်နေခြင်း 👉 အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဆက်ဆံနိုင်ခြင်း (သုတ်ထိန်းနိုင်ခြင်း) 👉 တစ်ကြိမ်ပြီးလျှင်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် စွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း 👉 အသက်အရွယ်ကြောင့်သော်၎င်း၊ ဆီးချို,သွေးချိုနဲ့ သုတ်အားနည်းသောကြောင့်သော်၎င်း၊ ကောင်းကောင်း မထောက်မက်နိုင်သူများ၊ စွမ်းဆောင်ရည် လျော့ကျနေသူများ ကျောက်တုံးကဲ့သို့ မာကြောလာပြီး ထောင်မက်နေတဲ့ စွမ်းရည်ကို ၁ နာရီအတွင်း မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်ရပါမည်။ 👉 ပန်းသေ,ပန်းညှိုးနှင့် သုတ်လွှတ်မြန်ခြင်းများကို အထူးပျောက်ကင်းစေပါသည်။ ဆေးသုံးပြီးနောက်ပိုင်း လိ့္မင်တံအမြဲတမ်း နိုးကြွ တင်းမတ်နေစေပြီး သုတ်အားအထူးကောင်းစေမည်။ ပန်းသေနေသူများ အကြောအားနည်းသူများ အိမ်မက်ထဲသုတ်လွှတ်တတ်သူများနှင့် သုတ်ထွက်မြန်သူများ ဤဆေးစားပြီး ပြန်လည်သန်စွမ်းလာစေရမည်။ ⏰ သောက်သုံးနည်းအညွှန်း ⏰ တစ်ရက်ကို တစ်လုံး အဆင်ပြေတဲ့အချိန်သောက်နိုင်ပါတယ်။ နွားနို့ (သို့) ပျားရည်တို့ဖြင့် သောက်ပါက ပို၍ ကောင်းပါသည်။ သို့သော် For္မmula 4္စ1 သည် alcohol (အရက်,ဘီယာ) တို့နဲ့မတည့်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဆေးနဲ့အရက်ကို အနည်းဆုံး ၂ နာရီခြားပေးရပါမည်။ ဖော်မြူလာဖိုတီဝမ်းသည် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိကြောင်း ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် U.S.A မှာ ရွှေတံဆိပ်ဆုရယူပြီး သက်သေပြခဲ့တဲ့ဆေးပါ။သို့သော်လည်း အချို့သောသူများကို ဒီဆေးသောက်ဖို့ ကန့်သက်ထားပါတယ်။ ❌ မသောက်သင့်သူများ ❌ ( A ) သွေးတိုး ၁၆၀ နဲ့အထက် ရှိသူများ ( B ) ကျောက်ကပ်ဆေးထားသူများ ( C ) နှလုံးရောဂါ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှိသူများ ( D ) အသက် ၁၈ နှစ်အောက် ကလေးများ လုံးဝ မသုံးစွဲရ မှာယူချင်ရင်ဖုန်းဆက် မှာပြီးမှမယူရင်တော့ခံစားရမယ် 09959700041 Viga 50000 29 May 2020 · 73K views
S2:E3 Dear Dearly S2, E3: Toddlers ‘Breastfeeding’ Baby Dolls and Moving On AfteraBreakup
We want to know what you think... Comment below how you feel about these topics! Dearly Presents 17 Jan 2019 · 114K views
S1:E31 I Have Fleas?! 🐞😷
Has this ever happened to you...? 😱 Follow The Adley Show for more! I will respond to every comment 🙏🏼 The Adley Show 27 Jul 2018 · 1.4M views
ပြေတီဦး နဲ့ ချစ်သုဝေ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့  မာနတွေပြိင်တဲ့ဇာတ်ကားပါ ကြိုက်မယ်ဆို Like လေးပေးသွားပါအုံး နောက်နေ့တွေမှာလဲတင်ပေးသွားအုံးမည် မြန်မာဇာတ်ကား နိုင်ငံခြားဇာတ်ကား သီးသန့် 19 Apr 2020 · 3.4M views
အပျိုဖော်ဝင်စ အတွေ့အကြုံကို ရှက်စရာမဟုတ်မှန်းမျှဝေခဲ့တဲ့ အေးမြတ်သူ။
## "အပျိုဖော်ဝင်တဲ့အချိန်တွေမှာ အေးမြတ်သူရဲ့ အမေဆီကနေ အမြင်နဲ့သင်ရတယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ထမီတွေ ချိတ်တွေ ကြိုးတွေနဲ့ လုပ်ခဲ့ရတာ အားလုံးဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးမှာပါ။ ရှက်စရာ၊ စိုးရိမ်စရာလို့လည်းမထင်ဘူး။ ရွံပြီး မလျှော်ရဲတာတော့ ရှိတာပေါ့" .. ဆိုတဲ့>> အေးမြတ်သူ။ ( အမျိုးသမီးများသာ ကြည့်ရှုရန်) Sunday Journal6Mar 2019 · 85K views